Ongaziwayo kwi-Intanethi: Akunakwenzeka? > UVielhuber uDavid
Ongaziwayo kwi-Intanethi: Akunakwenzeka?09
Ngamaxesha esikhalazo se-NSA, ayisiyiyo kuphela inethiwekhi-eyaziyo abasebenzisi ukuba bayazibuza ukuba ingaba umntu angaya njani kwinethiwekhi ngokungaziwa ukuze abaleke ukuqokelelwa kwedatha ngabasemagunyeni kunye neenkonzo eziyimfihlo. Nangona kunjalo, oku kuhlala kukhokelela kwiimpazamo kunye nokucinga okungachanekanga. Eyona mbono iphosakeleyo iphambili kukuncitshiswa kokungaziwa kokungaziwa kwedilesi ye-IP.
Kukho ezinye iiparameter ezidlala indima ebalulekileyo kungekuphela kwintengiso yentengiso ekwaziseni abasebenzisi: Ukongeza kwiicookies, ukuprinta iminwe kwisikhangeli kudlala indima ephambili.Umsebenzisi ngamnye ushiya ngasemva indibaniselwano edla ngokukhethekileyo yezinto ezininzi ezinjengebhrawuza, isisombululo sescreen kwaye nangakumbi. kwimigca efakiweyo. I-Panopticlick ibonisa oku ngokumangalisayo. Koku kulandelayo, ndiza kuzikhawulela ekuthatheni idilesi ye-IP kwaye ndibonise iindlela ezine zokufihla le datha yobuqu kwizikhululo ezikude:
Umncedisi womntu onegunya lokusebenzela omnye umntu: Iiproxies zisebenza njengezinto ezingena endaweni yezinye kwaye zigqithisele ukugcwala kwazo kwindawo eyiyo. Ukongeza kwiiseva zommeleli woluntu, iinkonzo ezahlukeneyo ezinje ngeCheapPrivateProxies zibonelela ngeeproksi zabucala. Kuzo zonke iimeko kuya kufuneka ubeke ithemba kakhulu kubanikezeli, ikakhulu abasekwe phesheya. Uhlaselo lomntu-phakathi kunye neembiza zobusi zizinto ezimbini nje ezinengozi ezinokukhankanywa kweli nqanaba.
Iinkonzo zeVPN: Ngekhadi elongezelelekileyo lekhadi yenethiwekhi, yonke (ihlala ibhalwe ngokufihlakeleyo) idatha yedatha idluliselwa kwisango leVPN- oku kuthetha ukhuseleko ngakumbi kunye nesantya kuneseva yommeleli, kodwa kwakhona ukubeka ukuthembela kumboneleli weVPN onje FIHLA .IO phambili. Kwiimeko ezininzi, ngokuchasene nezithembiso zabo ezipheleleyo, ababoneleli bakhuphe idatha yomsebenzisi kwabasemagunyeni, yiyo loo nto lonke ilungelo lokuphila liwa njengendlu yamakhadi.
Ukuhamba nge-anyanisi: Ngamaxesha amaqela e-crypto, inani labasebenzisi beprojekthi yeTor linyukile . Iipakethi zedatha zihanjiswa kwizikhululo ezininzi eziphakathi (iindawo), ezingasokuze ziyazi yonke indlela ukusuka kumthombo ukuya kwindawo ekuyiwa kuyo. Ukungancedi: Yonke idatha ehamba ngaphaya komgca (ukuba kunokwenzeka ingabhalwanga) kufuneka idlule indawo yokugqibela, ebizwa ngokuba yindawo yokuphuma- kwaye oku kunokufunda yonke into ngaphandle kwenyathelo. Abatshutshisi bolwaphulo-mthetho bazifumanele iTor ngokwabo- kwaye bajolise kubasebenzisi.
Umxube-Kaskaden: Inkampani eyaziwayo kuphela ethatha le ndlela nguJonDonym . Umxube wecascades ziiserver ezixhumeneyo ezikumazwe ahlukeneyo kwaye ziye zajongwa zaqinisekiswa ngumsebenzisi. Ukungena kumxube wecascade kuya kuthetha ukuba onke amacandelo e-cascade aphantsi kolawulo lwabasemagunyeni, nto leyo ingenakwenzeka kakhulu ngenxa yokungangqinelani kwendawo yeeseva. Ukungancedi lixabiso eliphezulu ekufuneka lihlawulwe ngabasebenzisi babucala kwinkonzo yorhwebo.
Ukuyibeka ngokufutshane: ukungaziwa ngokupheleleyo akunakwenzeka. Nokuba wenza izinto ngononophelo ngeenkonzo ezikwi-Intanethi ezinje ngezonxibelelwano, uhlala ujikeleza i-Intanethi kwaye ushiye ngokuzenzekelayo umkhondo onokuvavanywa emva kwexesha elinomda, nokuba zibhalwe ngokufihliweyo. Nangona la manyathelo angentla (kwaye ngakumbi indibaniselwano yawo) enokwenza ukulandelela kube nzima ngakumbi, umsebenzisi we-Intanethi ongaziwayo ngokupheleleyo yintsomi.